ကျောက်တော်က တင်းမကြီးရွာမှာ လက်နက်ကြီးကျလို့ လူနေအ...
22 มี.ค. 2563 - 18:14 น.
တင်းမကြီးကျေးရွာအနီးမှာ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့ မနက်ပိုင်းက တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသလို ကျေးရွာသားတွေလည်း မရှိကြတော့ဘဲ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီလို့ ရွာသားတွေကပြောပါတယ်။ ရွာအတွင်းမီးလောင်တဲ့နေရာ သုံးနေရာကို တစ်ပြိုင်နက်တည်းမြင်တွေ့ရတယ်လို့ မျက်မြင်တွေက ပြောပါတယ်။
တင်းမကြီးကျေးရွာမီးလောင်လို့ ရွာသားတွေမရှိတော့ပေမဲ့ အနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာသားတွေကို ဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ အဲ့ဒီဒေသခံတွေက အတည်ပြုပြောဆိုတယ်လို့ ကျောက်တော်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းကပြောပါတယ်။
"တင်းမကြီးရွာမှာ လူတွေမရှိတော့ဘူး။ အကုန်လုံးက ကျောက်တော်က ဒုက္ခသည်ခစန်းတွေနဲ့ သူတို့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ နေရာတွေကို ထွက်ပြေးသွားကြပါပြီ။ ဒီနေ့အဲ့ဒီရွာကိုမီးလောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မကြာခင်က တပ်မတော်ကနေ ရွာသားတွေကို အစည်းအဝေးခေါ်တယ်။ ရွာသားတွေထွက်မပြေးဖို့နဲ့ ပြေးလို့ရှိရင် ရွာကိုမီးရှို့မယ်ဆိုပြီး ပြောတယ်လို့ ရွာသားတွေက ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒါကို ဘယ်လိုမှ လက်ခံလို့မရဘူး" လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်းက ပြောပါတယ်။
တင်းမကြီးကျေးရွာအရှေ့ဘက် ရွာနဲ့သိပ်မဝေးတဲ့နေရာက တောင်ရှည်တောင်မှာ တပ်မတော် တပ်စခန်းရှိနေပြီး လက်နက်ကြီးကျည်တွေကို အဲ့ဒီနေရာက ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မျက်မြင်တွေက ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"၁၁ နာရီကျော်လောက်မှာ တင်းမကြီးရွာအရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ တောင်ရှည်တောင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကနေ လက်နက်ကြီးနဲ့ အချက် ၁၀ ကျော်လောက်ပစ်ပါတယ်။ ရွာထဲမှာလည်း လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ တစ်ဖွဲ့တော့ ရှိတယ်။ လက်နက်ကြီးပစ်လို့ မိနစ်ပိုင်းမှာ မီးခိုးစထွက်တာမြင်ရတယ်။ ရွာထဲမှာမီးရှို့နေတဲ့သဘောမျိုးပါ။" လို့ မျက်မြင်သက်သေရွာသားတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
တပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေက တင်းမကြီးရွာကိုကျော်လွန်လို့ ပလက်ဝဘက်ကိုချီတက်နေပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ပြန်လှည့်ပြီး တင်းမကြီးရွာကို မီးရှို့တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဇော်မင်းထွန်း က ဘီဘီစီကို ပြောပါတယ်။
"ဗုံးမိုးရွာနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ တိုက်ပွဲ လျှော့ချ ဖို့ဆိုတာ ဆန့်ကျင်ဘက် လိုဖြစ်နေပါတယ်" - အေအေ ဗိုလ်ချုပ် ထွန်းမြတ်နိုင်
မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့မှာလည်း တင်းမကြီးကျေးရွာအတွင်းက စစ်ကြောင်းတစ်ခု သေနတ်ပစ်ပေါက်ပြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ကာ ရွာသား ၃၀ ကျော်လောက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ၁၀ ဦးကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ ဖမ်းဆီးခံရသူတွေရဲ့မိသားစုတွေက ပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံနေရသူတွေနဲ့ မိသားစုတွေတွေ့ခွင့် မရကြတဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပါတယ်။ ရွာထဲမှာဆက်နေရင် အဖမ်းခံရတာ လက်နက်ကြီးကျရောက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကြောင့် ရွာသားတွေက ရွာလုံးကျွတ် ထွက်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဦးထွန်းဝင်း က ပြောပါတယ်။
အစိုးရတပ်မတော်နဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်တော် အေအေတို့အကြား တစ်နှစ်ကျော်ကြာ တိုက်ပွဲတွေအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း၊ အလယ်ပိုင်းနဲ့ ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွေအတွင်းမှာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရွာပေါင်း ၂၀ နီးပါးရှိနေပြီလို့ စစ်ဘေးရှောင်တွေကို ကူညီနေတဲ့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့စာရင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ ဒုက္ခသည်အရေအတွက်ကလည်း ၁ သိန်း ၆ သောင်းလောက်အထိ မြင့်တက်လာတယ်လို့ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေက စာရင်းပြုစုထားပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ကျောက်တော်က တင်းမကြီးရွာမှာ လက်နက်ကြီးကျလို့ လူနေအိမ်တချို့မီးလောင်၊ ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေး